Kumba - ChinaSourcing E & T Co., Ltd.
Zvikamu uye Zvikamu
Zvemagetsi & Zvemagetsi
Iyo kambani ChinaSourcing E&T Co., Ltd.
Sangana nekugutsikana kwako nehunyanzvi hwedu
Hunhu indekisi yakasimba kwatiri zvachose.Isu tiri kutarisa pakudzora kwemaitiro kuti tiwane chinangwa.
Isu takazvipira kuti tisangopa chete mutengo wemakwikwi asiwo kubvisa mari inokonzerwa neiyo isiri-value-added process.
Isu tinovimbisa 100% pane-nguva yekuendesa uye isu tinoshanda mukupfupisa nguva yekutungamira nguva dzose.
Kuenderera mberi Kuvandudza
Mukaha uripo pakati pechishuvo chako nekubudirira kwevatengesi unogara uripo.Isu tinoramba tichivandudza mune ese maficha emhando yekudzora, mutengo manejimendi uye Logistics, kusvika kune yakanakisa kuita.
Yakavambwa muna 2003, ChinaSourcing E&T Co., Ltd.Basa redu nderekupa hunyanzvi hwekumisa masevhisi uye kugadzira yakawedzera kukosha kune vatengi, uye kuvaka hurongwa hwepuratifomu pakati pevatengi vekunze nevashambadziri veChinese kune kukunda-kukunda mamiriro.
Zvekubvunza nezve zvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siya meseji pano uye isu tichabatana mukati me24hours.
Muna 2005, takaronga CS Alliance, iyo inounganidza makambani ekugadzira anodarika makumi mana anobatanidzwa mune zvakasiyana-siyana zvemaindasitiri.Kugadzwa kwemubatanidzwa kwakawedzera kunaka kwesevhisi yedu.Muna 2020, kuburitswa kwepagore kweCS Alliance kwakasvika kusvika pamabhiriyoni makumi maviri eRMB.
Isu takapa mazana ezviuru marudzi ezvigadzirwa kune vanopfuura 100 vatengi.
Stainless Simbi Mvura Tangi
Vashandi vanogadzira mapakeji akaunzwa kubva kuChina paBEST Inc's yekuronga nzvimbo muKuala Lumpur, Malaysia.Kambani yeHangzhou, Zhejiang mudunhu-yakavakirwa purovhinzi yakatanga chirongwa chekuyambuka miganhu yekubatsira vatengi vari munyika dzeSoutheast Asia kuti vatenge zvinhu kubva kuChina e-commerce platfor...
Chifananidzo cheJinbao, iyo panda mascot yeChina International Import Expo, inoonekwa muShanghai.[Mufananidzo/IC] Inosvika 150,000 square metres yenzvimbo yekuratidzira yakatochengeterwa gore rinouya yeChina International Import Expo, chiratidzo chekuvimba kwevatungamiriri veindasitiri muC...
China International Agricultural Machinery Exhibition (CIAME), kuratidzira kukuru kwemichina yekurima muAsia, yakapedzwa muna Gumiguru 28th.Pachiratidziro, isu ChinaSourcing takaratidzira zvigadzirwa zveagent yedu brand, SAMSON, HE-VA neBOGBALLE, panzvimbo yedu muhoro yekuratidzira S2, inosanganisira...
YH Co., Ltd. inhengo yakakosha yeCS Alliance, yanga ichipa zvigadzirwa zvekukiya masokisi eVSW kwemakore akati wandei.Gore rino, vhoriyamu yeodha yakapetwa kaviri kusvika mamirioni maviri zvidimbu nekuda kwemhando yepamusoro yezvigadzirwa.Panguva imwecheteyo, kambani inogadzira otomatiki ...
Keynote Hurukuro naHE State Councillor uye Gurukota rezvekunze Wang Yi kuAsia nePacific High-level Musangano paBelt uye Road Cooperation 23 Chikumi 2021 Vanoshanda navo, Shamwari, Muna 2013, Mutungamiri Xi Jinping vakakurudzira Belt uye Road Initiative (BRI).Kubva ipapo, nekutora chikamu uye kushanda pamwe chete ...
Piano uye Piano Zvikamu
Inlet uye Shandura